Handikachifu anụ ahụ Production Line Series Factory - China handikachifu anụ ahụ Production Line Series Manufacturers na Suppliers
OK-250 Doubledị Ugboro abụọ Ntanetị High-Speed ​​Handkerchief Tissue Production Line
Main Performance Ma Structure Atụmatụ 1.Adopt "U" Ọdịdị na okirikiri nhọrọ ukwuu, nọgidere na-mpịachi na mbukota, mara mma anya, ezigbo mbukota usoro, mụ na a pụrụ ịdabere na Ọdịdị. 2.Cantant erughị ala akara raw akwụkwọ 's na-agba ọsọ, kwụpụ-obere ụkpụrụ polishing ọsọ maka anụ ahụ. 3.Adopt BST akwụkwọ na-akpaghị aka na-agbanwegharị, obere-ụdị na ngwugwu ụdị ngwugwu nwere ike ịdị. 4.Programmable njikwa ịchịkwa intensively, na-arụ ọrụ site na ihuenyo mmetụ, na ọrụ nke di ...
OK-150 Handdị Handkerchief Tissue Single Lane Production Line
Main Performance na Structure Atụmatụ 1.Adopt Kwụ Ọtọ akara Ọdịdị na okirikiri nhọrọ ukwuu, nọgidere mpịachi na mbukota, mara mma anya, ezigbo mbukota usoro, mụ na a pụrụ ịdabere na Ọdịdị. 2.Cantant erughị ala ịchịkwa raw akwụkwọ na-agba ọsọ, kwụpụ-obere ụkpụrụ polishing ọsọ maka anụ ahụ. 3.Adopt BST akwụkwọ na-akpaghị aka na-agbanwegharị, obere-ụdị na ngwugwu ụdị ngwugwu nwere ike ịdị. 4.Programmable njikwa ịchịkwa intensively, na-arụ ọrụ site na ihuenyo mmetụ, wi ...
OK-120 Pịnye High Speed ​​Square Tissue Production Line
Main Performance na Structure Atụmatụ 1.Adopting Linear Ọdịdị layout, Na-aga n'ihu mpịachi, nkwakọ, Mara mma anya, ezigbo nkwakọ, ike na a pụrụ ịdabere na Ọdịdị 2. 3.Adopt BST akwụkwọ na-akpaghị aka na-agbanwegharị, obere-ụdị na ngwugwu ụdị ngwugwu nwere ike ịdị. 4.Programmable njikwa ịchịkwa intensively, na-arụ ọrụ site na ihuenyo mmetụ, na ọrụ nke na-egosipụta fai ...
Ok-402 Fulldị Ngwunye Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-arụkọ Ọrụ
Arụ ọrụ na nhazi akụkụ A na-eji igwe a eme ihe maka akpachapụrụ anya nke ụdị ọkọlọtọ na obere ụdị aka aka (ịgbakọta). Ọ na-eji PLC mmadụ-igwe interface ịchịkwa usoro, na servo moto na-achịkwa ihe nkiri idobe na nkọwapụta nke film idobe nwere ike gbanwee na ọ bụla larịị. Igwe a, site na ntinye ihe ole na ole, nwere ike iduzi ngwugwu nke handikachifu dị iche iche (ya bụ nkọwa dị iche) Model & Main Nka Para ...
Main Performance Ma Structure Atụmatụ Ọ nwere ike etinyere na a dịgasị iche iche nke dị iche iche nkwakọ, ruo 3 ogidi × 4 n'ígwé × 6 obere ngwugwu, mfe ịgbanwe, zuru servo akara, na mgbakwunye na-agbanwe agbanwe ebu, ndị ọzọ nke omume nwere ike ịbụ gbanwee na ogwe ọrụ. Ihe Nlereanya & Isi Ihe Nlereanya Ihe Nlereanya OK-602M Isi ahụ ndepụta akụkụ (mm) 3700x1160x1780 Speed ​​(akpa / min) 1 ahihia 3 n'ígwé: 90 akpa / min 2 ahịrị 3 oyi akwa: 60 akpa / min 3 ahịrị 3 oyi akwa: 40 akpa / min ...